मोजा गह्नाएर हैरान हुनुहन्छ ? यी उपाय गर्नुहाेस् गर्मीमा धेरैको मुख्य समस्या मोजा वा खुुट्टा गह्नाउने हुन्छ । मोजा वा खुुट्टा गह्नाउने समस्याका कारण कुनै नयाँ ठाउँमा जुत्ता खोलेर जान पनि निकै समस्या हुने गर्छ Share
सफा र स्वच्छ खाना बनाउन यस्ता कुरामा ख्याल गरौँ खानामा पाइने पोषक तत्वले मानिसलाई मात्र नभई विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुहरूका लागि पनि वृद्धि विकासमा सहयोग गर्दछ । यस्तै, खानेकुरा प्रशोधन र उत्पादन हुने भान्छा सफा नभएको खण्डमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छ । त्यसैले यी कुराहरुमा ध्यान दिऔं Share
१५ मिनेटमै निखार ल्याउने मुंग दालको फेसप्याक व्यस्त जीवनशैलीसँगै सुन्दर हुने रहर सबैको हुन्छ । तर, सुन्दर बन्नका लागि पार्लर गइरहने समय निकाल्न समेत मुस्किल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरमै केही उपाय निकाल्न सकियो भने समयको सदुपयोग, पैसाको बचत सँगै आर्कषक बन्न सकिन्छ । यसका लागि मुंग दालको फेस प्याक उपयोगि बन्न सक्छ Share
होली खेल्दा यी कुरामा ध्यान दिऔँ होली पर्व मनाउनुको पौराणिक कारण र इतिहास छ । होली खेल्ने दिनभन्दा एक दिनपहिला राति होलिका दहन गरिन्छ Share
अदुवापानी: महिनावारीको पीडा कम गर्नदेखि तौल घटाउनसम्म उपयोगी अदुवाले विभिन्न रोगहरुलाई पनि निको पार्दछ । अदुवा मात्रै होइन् अदुवापानीलाई नियमित रुपमा सेवन गर्ने हो भने शरीरलाई फाइदैफाइदा मिल्छ Share
गाजर एक फाइदा अनेक गाजरमा उच्च मात्रामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ । यसका साथै भिटामिन ए, मिनरल्स र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यो आँखा, छाला, पाचन प्रणाली र दाँतका लागि लाभदायी हुन्छ Share
दूध र जुसजस्तै प्राकृतिक हुन्छ बियर, यी हुन् पिउँदाका ९ फाइदा बियर दूध र जुसजस्तै प्राकृतिक हो । यसमा कुनै मिसावट हुँदैन । सीमित मात्रामा बियर पिउँदा विभिन्न समस्याबाट समाधान पाउन सकिन्छ Share
पीएचडी गरेपछि कक्षा ४ को जाँच ! ‘बुद्धको उपदेश मनपर्ने भएकाले पढेकी हुँ । १० कक्षासम्म पढ्ने सोचेकी छु’, तरा भन्छिन्, ‘अब कति पो समय बाँचिएला र ! हात खुट्टा चलेसम्म त पढ्ने हो’ Share
प्रेमको प्रतीक गुलाब गुलाब एउटा फूलको प्रजाति हो । यो फूल विश्वकै प्रसिद्ध फूल हो । गुलाबको फूल धेरै रङका हुन्छन् । गुलाबको हरेक रङको आआफ्नै अर्थ हुन्छ । प्रेम दिवसमा आफ्नो प्रेमीप्रेमिकालाई गुलाब दिएर प्रेम व्यक्त गरिन्छ Share
खाना खानेबित्तिकै गर्न नहुने कामहरू खाना खाएपछि बाहिर निस्किहाल्ने बानी धेरैको हुन्छ । तर, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भने यो राम्रो होइन । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खानापछि केही समय आराम गर्नुपर्दछ । त्यसैले, बिहान खाना खाएपछि १५/२० मिनेट आराम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य विद्हरूको सुझाव छ । Share
यी हुन् खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा खासगरी खाना तथा खाने समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केही खाद्य वस्तुमा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । यस्ता खाद्यपदार्थ नियमित खानाभन्दा अगाडि सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ Share
अनि राेकियाे चन्द्रदेव जोशीकाे कलम ‘३ रोपनी १२ आना जग्गाको फाइल थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा होइन, टिकिन्छा गुठीको नाममा बनाउनुपर्ने थियो । त्यसको इतिहास पनि मलाई थाहा छैन’ Share
तौल घटाउन मन छ ? पिउनुहोस् पुदिनाको चिया यसको सेवनले पेट सफा गर्दछ । यसरी शरीरमा प्राकृतिक तरिकाले शरीरका मासंपेशी चल्ने भएकाले तौल कम गर्ने मद्दत गर्दछ । पुदिनाको चियाले शरीरमा रहेको सुगरको मात्रालाई सन्तुलित राख्दछ Share
वाह जीवन, हाय मृत्यु, जय शम्भो ! पीडामा बाँचेका र आनन्दमा रमेका दुवैलाई सामान बेच्न भ्याई नभ्याई छ छेवैमा बसेका व्यापारीलाई । जसलाई व्यक्तिको हाँसो, आनन्द, पीडा र दुःखभन्दा व्यापारकै मात्र सरोकार छ । हो, यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, जसले संसारका सबैभन्दा दुःखी र सबैभन्दा सुखीलाई मात्र होइन, वैरागीदेखि संन्यासीसम्मलाई चित्त बुझाएकै छ Share
घरमा ढकमक्क फूल बनाउने मन छ ? घरमा फूल भएको मन नपराउने को नै होला र ? कसैको आफ्नै घर छ, कसैको डेरा । आखिर जे भए पनि हामीले आफू बस्ने आसपासको क्षेत्रको सौन्दर्य बढाउन सक्छौँ । त्यसकाे सरल उपाय फूल रोप्नु वा फूलबारी बनाउनु हो Share
कसरी हुन्छ ज्यानमारा भाइरसको नामाकरण ? हरेक भाइरसको नामकरणका पछाडि फरक फरक कथा र पृष्ठभूमि छन् । त्यसो भए इबोला, कोरोना, एचआईभी, राइनोलगायत विभिन्न भाइरसको नाम कसरी र के आधारमा राखियो होला त ? Share
यसरी गर्नुहोस् भान्छाको सफाइ त्यसबाट विभिन्न रोगको सङ्क्रमणसमेत हुन सक्छ । स्वस्थ खाना तयार गर्न भान्छाको सफाइ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यतः खाना तयार गर्न भान्छामा प्रयोग हुने भाँडाकुडा र अन्य सरसामानको नियमित सफाइ गर्नुपर्छ Share
श्वास गन्हाएर हैरान हुनुहुन्छ ? दाँत सफा नगर्ने बानी, सुत्ने तरिका नमिल्ने, घरबाहिरको खाना अर्थात् जंक फुड आदिले मुख गन्हाउने समस्या हुन्छ । तर, केही उपायहरू छन् जसको प्रयोगले यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ Share
घर चिटिक्क पार्ने यी तरिका घर सजाउने रहर त कसलाई पो हुँदैन र ? घरलाइ सफा, चिटिक्क, मिलेका फर्निचर, आकर्षक सजावट बनाउनु सबैको रहर हुन्छ । तर, यो रहरलाई पूरा गर्न खर्च पनि हुन्छ । घर सजाउनका लागि समय र पैसा दुवै चाहिन्छ Share